Tag: Tababar | Sagal Radio Services
Tababar ku saabsan ilaalinta hantida dadweynaha oo Muqdisho lagu qabtay
Sagal Radio Services • News Report • May 27, 2013
Maamulka gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ugu soo gabagabeeyay tababar xubno laga soo xulay degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Wardhiigley iyo Yaaqshiid, kuwaasoo loo tababaray sidii ay u ilaalin lahaayeen hantida dadweynaha oo ay ka mid yihiin nalalka qoraxda ku shaqeeya oo dhawaan la suray jidka 30-ka ee Muqdisho.
Askar loo tababaraayo inay ka howl-galaan cisbitaalka Xoogga dalka Soomaaliya
Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa maanta tababar u furey 70 askari oo ka mid noqonaya howl wadeennada cisbitaalka xoogga dalka Soomaaliya, oo dhawaan qeyb ka mid ah dib loo howl galiyay.
Talyaaniga oo soo dhaweeyay ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u furmey
Safiirka Taliyaaniga u fadhiya dalkeena Soomaaliya Andrea Mazzella ayaa sheegay in dowladda Taliyaaniga ay tababara ku siineyso gudaha dalka Jabuuti 200, askarioo kamid ah Ciidamada Boliska isuguna jira rag iyo haween.
Midowga Yurub oo waqtiga u kordhiyay tababarridda ciidamada Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2013
Midowga Yurub ayaa mudo labo sano ku kordhiyay howsha tababarka ciidamadda Soomaaliya ee (EUTM) sidaana waxaa ku dhawaaqay Midowga Yurub.
Wasaaradda kalluumeysiga Somaliland oo kalluumeysato tababareyso
Tababar ku saabsan kore u qaadidda aqoonta kalluumeysatada, ayaa shalay loogu soo gaba gabeeyay magaalada Barbara shaqaalo ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga Somaliland.
AMISOM oo sheegtay in ciidamada Soomaaliya hadda ka dib dalka lagu tababari doono
Afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, ayaa sheegay in tababarka ciidamada dowladda Soomaaliya hadda ka dib ay ka dhici doonaan gudaha dalka Soomaaliya, halka markii hore lagu soo tababari jirey waddanka dibbaddiisa.